दिदी–बहिनीहरूका लागि तिहारको सर्वोत्कृष्ट उपहार के हुन सक्छ ?
साप्ताहिक संवाददाता , कार्तिक ३, २०७४
आजभोलि खै कस्तो जमाना आयो ? मायाले न पुग्ने रै’छ । खल्ती खाली गर्नमै तल्लीन छन् सबै । अहिले त मायालाई कुनै महत्व नै दिइँदैन । रह्यो उपहारको कुरा, त्यो त क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । सके आईफोन–सात, नसके मायाले भरिपूर्ण आशीर्वाद । पुरा पढ्नुहोस्
देउसीमा चलेको देश
मनोज गजुरेल, कार्तिक ३, २०७४
तिहारमा खेलिन्छ । बिहारमा खेलिन्छ । दिल्लीमा खेलिन्छ । बेइजिङमा खेलिन्छ । वासिङ्टन डिसी, डोनर एजेन्सी, युरोपियन युनियन सबैतिर देउसी खेलिन्छ, तर देउसी खेल्नेचाहिं अधिकांश हामी नेपालीहरू नै हुन्छौं ।म त्यो देउसीको कुरा गरिरहेको छैन जुन हामी तिहारका बेला खेल्छौं । पुरा पढ्नुहोस्
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, कार्तिक ३, २०७४
दसैंमा लिंगे पिंग बनाउने नाइके ज्योतिप्रकाश नै हुन्थे । त्यही भएर झलले पिङ खेल्न गाउँमा पालो कुर्नु पर्दैनथ्यो । एसएलसीपछि दाइ काठमाडौं आए । केही वर्षपछि झलको पनि एसएलसी सकियो र उनी पनि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आइन् । एसएलसीपछि दाजुले काठमाडौं नल्याउनु भएको भए म वकिल बन्ने थिइँन भन्दै झल भन्छिन्– मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो सपोर्ट दाजुकै छ । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री आँचल शर्माका रक्षक दाजु
केही कुरा बिग्रियो भने गाली गरी हाल्ने, हात उठाइ हाल्ने हुँदा कक्षा ८ सम्म त उनलाई उदीपसँग बोल्नै डर लाग्थ्यो । स्कुलमा कम नम्बर आए पनि कसैसँग डर लाग्दैनथ्यो तर दादाको गाली खाइने भयो भनेर लुकेर बसेको आँचलको सम्झना अझै ताजै छ । अहिले आएर त्यो गाली र पिटाइलाई नै दादाको मायाका रूपमा बुझेकी छिन् आँचलले । पुरा पढ्नुहोस्
मौसमीको संगीतमा गाइड भाइ सचिन
सुरु–सुरुमा मौसमीलाई कन्सर्टमा पुर्‍याउने, लिन जाने, स्टुडियोमा पुर्‍याउने जिम्मा सचिनकै थियो । मौसमीका हरेक कमीकमजोरीहरू नडराई, नलजाई अनि नरिसाइ भन्थे सचिन । यसो गर्नु, यसो नगर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहन्छन् उनी । जीवनका धेरै मोडमा सचिनले नै सम्हाल्दै आएका छन् मौसमीलाई । पुरा पढ्नुहोस्
विगतमा हाइप्रोफाइल व्यक्तिको यसरी नै हत्या भएको थियो
साप्ताहिक संवाददाता , कार्तिक २, २०७४
दिउँसै यसरी व्यवसायीहरूको हत्या हुनु, त्यसमा पनि प्रहरी घटनास्थलमा ढिलो पुग्नुले हाम्रो देशको सुरक्षा भरपर्दो छैन भन्ने जनाउँछ (फ्रन्टपेज : दाउदपथमा नेपाली डनहरू) । विगतमा पनि हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको यसरी नै हत्या भएको थियो । ती घटनाबाट सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्रले पाठ सिक्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको पाइएन । आउने दिनमा यस्ता घटना सुन्नु नपरोस् । पुरा पढ्नुहोस्
भाइटीकाको उपहारमा बार्गेनिङ हुँदैन
मेरो भाइ प्यारो छ, त्यसैले बार्गेनिङ गरिरहनु पर्दैन । भाइले मलाई पैसा नै दिन्छ (आमाले दिएको), म उसैलाई मनपर्ने कुरा उपहार दिन्छु । पुरा पढ्नुहोस्
निर्माता सताउने अभिनेता
आफूले ५ हजार पारिश्रमिक लिएर चलचित्र ‘करोडपति’मा अभिनय गरेको स्मरण गर्दै उप्रेतीले अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवस्था निकै राम्रो भएको बताए । कम लगानी र कमजोर प्रविधिबाट तयार पारिने नेपाली चलचित्रलाई विदेशी चलचित्रसँग तुलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ । पुरा पढ्नुहोस्
युट्युब चलाएर लखपति बनौं
आभास अधिकारी , नितेश उपाध्यायकार्तिक ३, २०७४
कहीँ–कतै जागिर खान नगई घर बसी–बसी मासिक लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नपत्याउनेहरूको जमात ठूलै छ नेपालमा, तर यो वास्तविकता हो । हामीले सधैं भिडियो हेर्न प्रयोग गर्ने युट्युबमा केही प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न सकियो भने घर बसी–बसी राम्रो कमाइ गर्ने कुरा असम्भव छैन । पुरा पढ्नुहोस्
कार्तिक ३ देखि ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष), कार्तिक ३, २०७४
कात्तिक २ गते लक्ष्मीपूजा, ३ गते नेपाल सम्वत ११३८ प्रारम्भ, गोवद्र्धन पूजा, म्हपूजा, ४ गते भाइटीका, ७ गते संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ९ गते छठ पुरा पढ्नुहोस्